Otu esi emepụta onwe gị Emoji na omenala
Ngwa & ngwa Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Achọrọ ịme onwe gị emoji? Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na ndị agadi ahụ, na-amụmụ ọnụ ọchị, ndị na-ese akwụkwọ na ndị ọzọ emoticons ị na-ahụ n'ọtụtụ akụkụ na ozi nzi, ọ nwere ike ịbụ oge iji tụlee ịmepụta emojis.
Ma, olee otu ị ga - esi mee ka emoji ọhụrụ? Ọ bụghị ihe niile dị mfe ma ọ bụrụ na ị ga-amalite na ọkọ.
Ejiri ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ amalitela na-adịbeghị anya iji mee ka ị nwee ike ịmegharị ọhụrụ, ụdị nsụgharị nke onwe gị nke ndị mmadụ hụrụ n'anya ịtinye n'ime ozi ederede. Imirikiti bụ ngwa ngwa, ọ dịghịkwa onye zuru oke, ma ha nwere ike ịba uru ịchọpụta ma ọ bụrụ na ị bụ onye fanyere emoji.
Emoji ebumnuche abụọ echichi, karịsịa, ndị e mepụtara maka ndị ọrụ iPhone n'oge okpomọkụ nke afọ 2014, MakeMoji na Imojiapp. Ha abụọ na-atọ ụtọ, nweekwa ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka ha yie netwọk mmekọrịta.
Ngwa mkpanaka a eji arụ ọrụ maka ngwaọrụ iOS na August 2014 site na ụlọ ọrụ a na-akpọ Emoticon Inc. Ọ na-enye ngwaọrụ na-edezi ihe oyiyi nke na-eme ka ndị ọrụ mepụta ihe oyiyi site na nhazi ma ọ bụ foto, wee meezie onyinyo site na-agbakwụnye, ma ọ bụ na agbanwe agbanwe ihe dịka nku anya nku , okpu na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ihe dị mfe iji tụọ foto gị; ọ na-arụ ọrụ site n'ịgbakwụnye ihe dị iche iche n'ime nsị ma mesịa jikọta ha.
Makemoji na-achọkwa ịbụ netwọk mmekọrịta, na-enyefe ihe ndị yiri nke oyiyi netwọk mmekọrịta dika Instagram. Mgbe ị mepụtara emoji nke gị ma nye ya aha ma ọ bụ aha, foto gị na-abanye n'ime ebe ozi Makemoji ebe ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịhụ ya. A na-echekwa ya na saịtị nke gị ka ndị ọzọ hụ ebe ahụ, kwa.
Emojis kere Makemoji nwere ike itinye ya ozugbo na ozi ederede nke Apple na iMessage, ngwa ngwa texting nke na-abata tupu etinye ya na iPhones niile. Mana ọ chọrọ onye ọrụ iji malite ngwa Makemoji iji tinye foto n'ime ozi ahụ; ị pụghị ịnara akara ngosi gị site na ngwa iMessage, dị ka ị na-eme mgbe emoji na-achịkwa ma na-achịkwa ya na Unicode Consortium. A na-etinye ha na nke a na dijital emoji di iche iche di iche iche nke nwere ike inweta ya na otu iMessage. Site n'ememe emojis gị na MakeMoji, ị ga-agbanyụ ngwa ahụ ka i detuo ozi ahụ gaa na ngwa iMessage gị
Meemoji na ụlọ ahịa iTunes.
Imojiapp bụ ngwa ọzọ n'efu maka iPhone nke malitere na July 2014, ọ dịkwa yiri Makemoji. Ihe kachasị dị iche bụ na ngwá ọrụ oyiyi Imoji na-adabere na foto ma ọ bụ ihe oyiyi, ma ọ bụghị eserese nke ị na-eme, iji mepụta oyiyi mbụ (Makemoji, site na iche, na-eme ka ndị ọrụ malite na ọdịdị dịka gburugburu ma ọ bụ square ma tinye ihe, na mmetụta na-ese onyinyo ha.)
Ngwa Imoji nyere ndị ọrụ ohere ijide onyinyo ọ bụla na weebụ ma ọ bụ na desktọọpụ ha, ma wepụ ya site na ya iji mee ka ihe ntanye standalone, ma tinye ya na ozi. Ndị ọrụ Imoji ma ọ dịkarịa ala na mbido yiri ka ha na-enwe mmasị iji ihu ndị dike ma na-atụgharị ha ka ha bụrụ akwụkwọ mmado. Ị nwere ike ịchekwa onwe gị ma ọ bụ mee ka ọha mmadụ mara ma kwe ka ndị ọzọ jiri ya.
Imojiapp na ụlọ ahịa iTunes.
Ndị ọzọ Emoji Netwọk
Emojli bụ onye emoji-naanị netwọk mmekọrịta mara ọkwa na afọ 2014 nke e mere iji kwe ka ndị mmadụ na-ekwurịta okwu na otu usoro - ị chepụtara ya, emoji.
Ndị okike ya ugbu a na-anabata ndetu maka aha njirimara na ibe ya.
Gụkwuo na nchịkọta akụkọ a nke Emojli.
Kedu ka Facebook na ozi égwu drain batrị ekwentị
Ihe mere I ji jiri Mmasị App ka Nhazi gị Social Media Posts
The Best Twitter Apps maka iPad
7 Tinder-Dị ka Egwuregwu maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla
Otu esi aga anya na ozi Yahoo
8 Ihe ntanetịime vidiyo na oge kachasị ogologo oge
The Top iPad Facebook Apps
Akwụkwọ Apple na Kodak Photo
Kedu Usoro Usoro Njehie System?
Mụbaa Google PageRank
Otu esi egbochi onye site n'itinye ngwa ngwa iPad n'iji ntuziaka eduzi
Dungeon Hunter 4 Na-egosi Ọchịchịrị Na-adịghị Anya nke Ịzụ Ihe Ngwaahịa
Esi wepụ Gmail site na Gmail
Ụkpụrụ Iwu nke Ntanetị FM
The Top iPad Movie na TV Streaming égwu
Weghachite PC a: Azughari Ntughari
N'iji Apple Diagnostics na-eme ka nsogbu Mac gị
Ọdịiche Dị n'etiti Gụgharia na Nbudata Media
Esi esi Wụnye Kọmputa Ikuku na Nru
192.168.2.2 - Enyemaka na nduzi na adreesị IP a
Otu esi eji Google Maps Street View
Kedu ihe bụ Tidal?
Otu esi etinye ndi otu n'ime ndepụta nkesa na Outlook
Kedu ihe bụ Near Field Communications?
Ụdị Mbadamba Ụdị Excel kachasị mma nke Microsoft
Otu esi eme ka ego site na ire ere
Usoro Ngwudata maka Okenye Ndị Mpịakọta nke Anọ: Ịgba Isles